Fanaanada Shukri Sindiko oo la soo shaac baxday qaab cusub iyo dar dar ay la soo gashay fanka soona saaraty heeso cusub(Daawo) - iftineducation.com
Muuqaalkeeduna uu aad u sareeyo kana muuqato dareen jaceyl iyo waliba muuqal cajiib ah.
Fananada Shukri Sindiko oo horay loogu xauusto heeso fara badan, ayaa durba fanka Soomaalida la soo gashay dardar xoog leh xaga fanka Soomaalida oo aay aad ula dhaci dooonaan. dad ara badan oo xiiseeyo fanka.
Dhalin yarada xiisaysa fanka Soomaalida oo Daawatay Muqaalka heesaha cusub ayaa sheegay in hadii Shukri Sindiko saan ku sii socoto wada cad uga tagayso fananiinta yar yar ee soo caan baxay sanadahi danbe.
Sido kale mar wax laga waydiiyay in aay heeso kale soo wado Fanaanada Shukri Sindiko ayaa Waxaa aay sheegtay in todobaadkaan gudahiisa aay soo saari doonto heeso ara badan oo aay ugu tala gashaay shacabka Soomaaliyeed ii xiisaya fanka.
Hlkaan Ka dhageyso Heesta aay Qaaaday Fanaanada Shukri Sindiko